China Angle grinder, drill effact, marbra, drill li-ion, orinasa mpanamboatra herinaratra ary mpanamboatra | Boda
Ny fitaovana herinaratra matetika matetika hitantsika eny amin'ny tsena dia ireto ambany ireto:
1. Driver Lithium rechargeable driver / rechargeable driver: izay mety amin'ny fandavahana lavaka miditra sy ivelan'ny visy, metaly, seramika ary plastika.
2. Ny fandavahana herinaratra azo havaozina dia mety amin'ny fametahana visy. Ny fandavahana dia azo atao amin'ny hazo, vy, seramika ary plastika, na fitrandrahana amin'ny biriky, beton ary vato.
3. Ny fonosana azo havaozina dia azo ampiharina amin'ny fikorisana sy fivoahana amin'ny haben'ny habe voalaza, ary azo ampiasaina koa hanamafisana sy hamaha ireo voanjo ao anatin'ny haben'ny habe voalaza.
4. Ny tantanana elektrika azo averina famerenana dia mety amin'ny fitrandrahana amin'ny biriky, beton ary vato. Azonao atao koa ny mandavaka lavaka amin'ny hazo, vy, seramika ary plastika. Ny milina misy fanaraha-maso hafainganam-pandeha elektronika sy ireo asa mandroso / mamadika dia afaka mamaha / manenjana visy sy paompy koa. Karazana
5. Ny fandavahana tanana amin'ny herinaratra dia mety amin'ny fandavahana amin'ny plastika, seramika, vy ary hazo. Ireo milina miaraka amin'ny fanitsiana herinaratra sy ny asa mandroso / mamadika dia mety mihodina sy mandroso kofehy ihany koa. Karazana
6. Ny fandavahana fiatraikany dia mety amin'ny fitrandrahana amin'ny biriky, beton ary vato. Izy io koa dia afaka mamoaka lavaka amin'ny hazo, vy, seramika ary plastika. Ireo maodely misy fitaovana fanaraha-maso hafainganam-pandeha elektronika sy fiasa mandroso / mamadika dia afaka mamaha / manamafy ny visy sy paompy koa. Karazana
7. Hammer drill dia azo ampiasaina amin'ny fandavahana hovitrovitra amin'ny beton, rindrina biriky ary vato. Aorian'ny famonoana ny fandavahana ny vibration dia azo ampiasaina ny milina handrarahana lavaka amin'ny hazo, vy, akora vita amin'ny seramika ary plastika. Ny masinina misy fitaovana fanaraha-maso hafainganam-pandeha elektronika sy biriky miiba / miiba dia afaka mamadika visy na kofehy fandavahana. Ny milina misy fihenam-bidy dia afaka manatanteraka ny asa fitetezana. Karazana
8. Ny pick elektrika dia mety amin'ny fametahana amin'ny beton, rindrina biriky, vato ary asfalta. Raha apetraka ny kojakoja mety dia azo ampiasaina koa ny milina hikapohana visy na hametahana fitaovana malalaka. Karazana
9. Ny fikosohan-joro dia mety amin'ny fanapahana, fikosoham-bary ary fikosehana vy ary vato. Tsy avela ampiasaina mandritra ny fandidiana ny rano ary tsy maintsy ampiasaina ny takelaka fitarihana rehefa manapaka vato. Ho an'ny modely misy fanaraha-maso elektronika. Ny fikolokoloana sy ny famolahana dia azo atao ihany koa raha toa ka apetraka amin'ny masinina toy izany ny kojakoja mifanaraka aminy. Karazana
10. Ny milina poloney dia mety amin'ny fandefasana vy sy vato. Karazana
11. Ny grinder mahitsy (miaraka amina kodiarana emery) dia mety amin'ny fikolokoloana vy sy fanesorana ny burr. Ny milina misy fitaovana fanaraha-maso hafainganam-pandeha elektronika dia afaka mametraka borosy, kodiarana miendrika mpankafy ary fehikibo eo amin'ny masinina amin'ny hafainganam-pandeha ambany ihany koa. Karazana
12. Ny mpamily herinaratra dia mety amin'ny fametahana volo sy fantsom-bato amin'ny hazo, vy, seramika ary plastika. Karazana
13. Ny milina fikitihana dia mety amin'ny fametahana lavaka mahitsy. Aorian'ny fametrahana kojakoja manokana dia azo tanterahina ny fikapohana jamba. 14. Ny wrench effects dia mety amin'ny fametahana / famoahana ny visy ao anatin'ny habe voalaza ao aminy, ary afaka manenjana / mamaha ireo voanjo ao anatin'ny habe voalaza ihany koa. Karazana
15. Ny herinaratra vy dia mety amin'ny fanapahana vy, ary tsy hamokatra puce. Azonao atao ny manapaka ny fiolahana sy ny tsipika mahitsy. Karazana
16. Ny fanetezana herinaratra / fanetezana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra dia mety amin'ny fanapahana lovia vy, ary ny takelaka metaly dia tsy hivily sy hihasimba aorian'ny fanapahana. Azo ampiasaina amin'ny fanapahana tsipika mahitsy, fanapahana lavaka anatiny ary fanapahana zoro tery tery. Karazana
17. Ny tsofa diagonaly dia azo ampiasaina amin'ny fanapahana mahitsy lava sy fametahana mahitsy. Karazana
18. Ny milina fanapahana profil dia afaka manapaka ny lovia metaly mitsangana sy mitsivalana nefa tsy mampiasa rano. Karazana
19. Ny milina fanapahana vato dia mety amin'ny fametahana na fanapahana ireo akora mineraly avo lenta (toy ny marbra). Ilaina ny mampandeha ny milina amin'ny toeram-piasana azo antoka ary mampiasa fonony fiarovana. Ny milina misy fikirakirana manokana dia azo ampiasaina amin'ny fanapahana lena. Tsy azo atao ny mampiasa an'io milina io hanapaka hazo, plastika na vy. Karazana
20. Masinina fametahana rindrina
Izy io dia miaraka amin'ny slider mpitari-dalana, izay mety amin'ny fanapahana na fikosoham-bary amin'ny alàlan'ny akora misy mineraly avo lenta (toy ny beton mihamafy, rindrina biriky ary lampivato asphalt, sns.), Tsy mampiasa rano
21. Ny curvilinear dia mety amin'ny fanapahana hazo, plastika, vy, tabilao vita amin'ny seramika ary fingotra eo ambanin'ny tany. Afaka manapaka tsipika mahitsy na zoro bevel (hatramin'ny zoro 45 degre).
22. Izy io dia mety amin'ny tsofa amin'ny sehatra miasa miorina. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny tsofa mitsivalana lava sy miampita na mitsofa diagonaly. Ny zoro fanapahana farany ambony amin'ny fanapahana zoro oblique dia 45 degre. Karazana
23. Ny milina fanapahana latsa dia afaka mampiasa an'io milina io mba hanapahana endrika maro amin'ny plastika mihosin-kazo, fingotra mihosin-javatra ary fitaovana mitovy amin'izany. Karazana
24. Ny sanders / trimmer / planer dia mety amin'ny fikosoham-bary ny hazo, ny plastika, ny mpameno ary ny endrika vita amin'ny loko. Ny masinina miaraka amin'ny asan'ny fanitsiana herinaratra dia afaka manao asa polishing ihany koa. Karazana
25. Ny basy rivotra mafana dia azo ampiasaina hiondrika na hantsaka plastika, hanala ny loko efa antitra ary hampihena ny fantsona mihena. Ho fanampin'izany, dia azo ampiasaina amin'ny fametahana lasopy, firavaka vita amin'ny firaka koa ny lelan'ny lakaoly ary ny fantson-drano manonta. Karazana
26. Ny mpitsikilo rindrina dia afaka mamantatra vy, tariby, hazo ary fitaovana hafa. Karazana
27. Ny rangefinder laser dia afaka mandrefy ny halavirana, ny faritra ary ny habeny ary ny refy tsy refesina. Karazana
28. Fitaovana haavo laser ity fitaovana fandrefesana ity dia mety amin'ny fandrefesana sy ny fizahana ny tsipika mitsivalana sy mitsangana.
Fampiharana grinder zoro:
1.Dira fikosoham-bary no azo ampiasaina amin'ny fikolokoloana vy, fanapahana ary fanoherana tsy harafesina;
2.Ny fanapahana vato dia azo ampiasaina hanodinana tile, vato, hazo kely ary veneer (azo antoka kokoa noho ny fanapahana hazo amin'ny grinder zoro misy tsofa kely);
Ny famolahana vy dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanovana ny kodiarana sy ny kodiarana famolahana.
1.It dia manokana amin'ny fandavahana amin'ny tany matanjaka, beton, ary vato, ary marma elektronika marolafy. Azo ampiasaina izy io fa tsy fandefasana herinaratra tsotra sy fakana herinaratra rehefa ahitsy amin'ny toerana sahaza azy ary miaraka amina fantsona mety.
Pickaxe fandavahana elektrika: misy fiatraikany lehibe amin'ny fiatraikany mivantana sy fanimbana zavatra, toy ny fampiasanao marotoa sy paingotra hiasa, fa ny fahombiazany dia azo antoka fa avo kokoa noho ny an'ny asa tanana.
2.Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny takelaka elektrika sy tantanana herinaratra dia ny fahasamihafana eo amin'ny habeny. Ireo palma elektrika misy heriny lehibe dia afaka mandavaka lavaka lehibe antsoina hoe marotoa elektrika, izay mitovy amin'ny fotokevitra. Ireo drills roa ireo dia misy fiasan'ny fihodinana sy ny famonoana.
Ny fitrandrahana fiatraikany dia azo ampiasaina ho fandavahana elektrika mahazatra. Misy switch switch over-over eo aminy, izay azo ovaina ho fitrandrahana mahazatra ary hitrandrahana fiatraikany.
Ny herin'ny fandavahana herinaratra 12V dia tsy mitovy amin'ny an'ny 21V. Ny tanjaky ny 12V dia kely noho ny an'ny 21V.
1. Ny tahan'ny famoahana ny bateria fandavahana herinaratra dia mizara ho ambaratonga maro. Ny herin'ny fandavahana 12V dia eo amin'ny 10C, ary manodidina ny 5C ny herinaratra.
2. Miankina amin'ny herin'ny vokatra ihany koa ny herinaratra, satria avo ny volan'ny output 21V, na dia tsy lehibe loatra aza ny ony ankehitriny dia azo ampiana herinaratra, ka tsy afaka milaza fotsiny isika hoe mitovy ve ny herin'izy ireo, fa koa miankina amin'ny fahafahany miaritra herinaratra.
BOSENDA dia manome andiana fitaovana mandeha amin'ny herinaratra, ny mpanjifa fitaovantsika herinaratra dia avy amin'ny firenena eropeana, Amerika avaratra, amerika atsimo, Eropa atsinanana, firenena afovoany atsinanana ary atsinanana atsimo atsinanana.
Ho an'ny vokatra fitaovana mandeha amin'ny herinaratra bebe kokoa, aza misalasala mifandray aminay.
Previous: Milamina azo antoka, tsy mahazaka afo, hidin-kaody amin'ny dian-tanan'ny tanan-tanana, azo antoka isan-karazany
Manaraka: Tape elektrika, kasety mpanohana ny fandoroana, kasety PVC, kasety misisika